I-Pine View Cabin
Enkabeni yeCurrumbin Valley kukhona “Pine View Cabin” yethu enokuthula. Ibekwe kahle ukuze uhlole okungcono kakhulu i-Gold Coast nendawo eyizungezile.
Idalwe ngokunethezeka kwakho nokuthokoza kwakho engqondweni, lesi sikhala sinikeza indawo ebanzi yesimanje enekhishi, igumbi lokuhlala, igumbi lokugezela, igumbi lokulala elingu-1 elinombhede olingana nenkosi, kanye nokubukwa okumangazayo okuvela kuwo wonke amagumbi.
Ukuhamba ibangana nje ukusuka emachibini emvelo edwala, imizuzu eyi-15 ukusuka e-Currumbin beach kanye nemizuzu engama-20 ukusuka esikhumulweni sezindiza iGC.
Isikhala siklanywe ngobunono kucatshangwa ngokunethezeka kwakho nokuphumula. Ikhabethe linokubukwa kwezwe okuhle okuvela kuwo wonke amagumbi. Kungakhathaliseki ukuthi lina noma liyashisa, indawo inokuthula futhi inokuthula.
Ukuya e-Currumbin Valley kufana nokungena emgedeni wokuzijabulisa ka-Aladdin. Ukusuka ogwini, bhekisa amabombo eningizimu-ntshonalanga ungene komunye umhlaba ngo-Currumbin Creek Road oholela ku-Tomewin Mountain Road okhuphukela e-Tomewin Mountain.
Emamitha angu-457 ukuphakama inikeza indawo enhle kakhulu phezu kwaso sonke isigodi kanjalo nasenyakatho ukuya eMount Tallebudgera nasentshonalanga ngaphesheya kwezintaba zeRainforest ezisohlwini lwamagugu omhlaba zaseCougal naseSpringbrook. Ukushayela ngokwakho esigodini kuyinto ekhethekile, uzodlula amapulazi, amadolobhana e-eco, izindawo zokudayisa izithelo, imibhede nezindawo zokudlela zasekuseni, izindawo zokuhlala, izingadi namakotishi. Kulula ukubona ukuthi kungani inzalo yezifiki zakuqala, eza lapha zizofuna izingodo zomsedari ezibomvu futhi zifuye izinkomo zobisi nobhanana basemapulazini, zisabiza lesi sigodi esiluhlaza njengekhaya.
Okuvelele kwalesi sigodi kufaka phakathi ukupholisa amachibi e-Currumbin Rock okubhukuda kanye ne-Camp Eden yomuntu oqaphela impilo. Ingxenye ye-Mount Cougal ye-Springbrook National Park ihlezi ekugcineni komgwaqo u-Currumbin Creek. Kukhona nenqwaba yamagalari asebenzisana nezitsha zobumba nezobuciko nemisebenzi yezandla lapho, uma, ubhekisisa, i-genie yakho ingase ilinde. (umthombo - indawo eGold Coast).
Izivakashi zinobumfihlo bazo ngenkathi zisahlala ekotishi, siyatholakala uma usicela uma ungathanda ukuthintana.